कला यात्रामा एलिना – NamoBuddha Khabar
कला यात्रामा एलिना
शनिबार, भाद्र १३, २०७७ | ६:५९:५९ |
धुलिखेल–आफ्नो पृथक् पहिचान स्थापित गर्न त संघर्ष गर्नु पर्यो नै । यस्तैमा जीवनमा केही न केही काम गरेर समाजमा आफूलाई चिनाउने सपना सानैदेखि साँच्नुभएको थियो गोरखाकी एलिना श्रेष्ठले ।
सानैदेखि गीत गाउन, नाच्न र अभिनय गर्नमा औधी रूचि थियो एलिनाको । तिनै बाल्यकालीन अभिरुचिलाई वास्तविक जीवनमै साकार पार्न एलिना कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ ।
एक वर्षअघि ‘दिलमा तिमी छौ’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेर कलाकारिता यात्राको औपचारिक आरम्भ गरेको बताउनुहुन्छ एलिना । उहाँका अनुसार यो छोटो समयमा नै चर्चित गायक गायिकाहरूका ४ ओटा म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसक्नुभएको छ । यसबिचमा दुई ओटा टेलिसिरियलमा पनि अभिनय गरिसक्नुभएको छ । उहाँ मोडलिङमा मात्र हैन गीत लेख्न र गुनगुनाउन पनि उत्तिकै सिपालु ।
कलाकारितामा प्रवेश गरेपछि स्थापित हुन र झन टिकिरहन निकै कठिन हुने कुरा एलिनालाई थाहा नहुने भएन । यद्यपी कुनै पनि आश्वासन र प्रलोभनसँग सम्झौता नगरीकन यो क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्ने उहाँको ध्याउन्न छ ।
गोरखा नगरपालिका वडा नं. ८ मा वि.सं. २०५३ साल चैत्र १६ गते सामान्य किसान परिवारमा बुवा वीरबहादुर श्रेष्ठ तथा आमा नानुमाया श्रेष्ठको कोखबाट जन्मिएकी एलिनाले छोटो समयमै यो क्षेत्रमा गनुुपर्ने संघर्षबारे अनुभव संगाल्नुभयो ।
एलिना भन्नुहुन्छ – “कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश पाउनै गाह्रो रहेछ । प्रवेश पाएपछि पनि स्थापित हुन र यसै क्षेत्रमा टिकिरहन अझै कठिन हुने मैले देखेकी छु । तर, म सानैदेखि दुःख–सुखहरूसँग मितेरी लगाउँदै आएकी केटी भएर होला हार खाएकी छैन । संघर्ष जारी राखेकी छु ।”
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण अहिले नेपाली कला गतिविधि ठप्प हुँदा उहाँलाई पनि नरमाईलो त लागेकै छ । लामो समय लकडाउन हुँदा उहाँका थुप्रै काम रोकिएका छन् । आफ्नो पुरानै लयमा फर्किन परिस्थित सामान्य हुनुपर्यो नै,तिनै समयको पखाईमा रहेको एलिना बताउनुहुन्छ ।
आगामी दिन स्थानीय स्तरमा लुकेका प्रतिभाहरूको खोजी र तिनका प्रतिभाको प्रस्फुटनका लागि प्लेटफर्म विकास गराउने अभियान चलाउने योजनामा रहेको समेत सुनाउनुहुन्छ एलिना ।